सुुरक्षित र व्यवस्थित यातायात सेवाको विकास गर्छांै | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / सुुरक्षित र व्यवस्थित यातायात सेवाको विकास गर्छांै
सुुरक्षित र व्यवस्थित यातायात सेवाको विकास गर्छांै
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता March 9, 2018	0 155 Views
राप्ती अञ्चल सार्वजनिक यातायात व्यवसायी समितिका अध्यक्ष
राप्ती अञ्चल सार्वजनिक यातायात व्यवसायी समितिको आज शुक्रवार १७ आंै अधिवे शन तथा ३३ आंै साधारणसभा हुँदै छ । सर्वसम्मतिमा ने तृत्व चयनको प्रयाससंगै समितिका अध्यक्ष सुरे श हमाल पुनः ने तृत्वको तयारीमा हुनुहुन्छ । युगबो धकर्मी गिरिराज ने पालीले यातायात क्षे त्रको अवस्था , समस्या र यो जनाबारे गरे को कुराकानीको सारसंक्षे प यहाँ प्रस् तुत गरिएको छ । –सम्पादक
समितिको पुनः ने तृत्व गर्ने आकांक्षा राख्नुभएको छ, किन ?
अवश्य भन्नै पर्छ, अबको नया“ कार्यकालको ने तृत्व पनि मै ले नै लिन खो जे को छु । यातायात व्यवसायीहरुको मायाले फे रि पनि मे रो ने तृत्वमा राप्ती अञ्चल सार्वजनिक यातायात व्यवसायी समिति सर्वसम्मतरुपमा नया“ कार्यसमिति चयन गर्ने प्रक्रिया चलिरहे को छ । व्यवसायीहरुको माया र काम कर्तव्यप्रति निष्ठावान रहे काले म अहिले पनि ने तृत्व सम्हाल्ने पक्षमा उभिएको हु“ । किनकि यातायात क्षे त्र पूर्णकालीन कर्मचारी मै हो जस् तो लाग्छ । व्यापार, व्यवसाय र रो जगार जे भने पनि यही क्षे त्र हो  । अर्काे कुरा, मे रो कार्यकालदे खि यातायात क्षे त्रका समस् याहरु धे रै न्यूनीकरण हुदै गइरहे का छन् । यातायात क्षे त्रमा गर्नुपर्ने काम र के ही समस् याहरु अझै बा“की रहे काले मै ले अबको कार्यकालको पनि ने तृत्व सम्हाल्ने र जिम्मे वार तरीकाले नया“ कामको शुरुवात र बा“की समस् या समाधानको अठो ट लिएको छु ।
के ही काम गरिसके का छांै के ही बाकी छन् भन्नुभयो । अब बचे का पुराना कामको नया सो च कस्तो छ ?
राप्ती अञ्चल सार्वजनिक यातायात से वा सुचारु गरे को निकै लामो समय भइसके को छ । त्यो तपाइलाई पनि थाहा छ । हामीले से वा, समयको ख्याल राख्दै नया–नया यो जनाको के ही परिकल्पना गरे का छौ  । जस् तै कतिपय गाउमा यातायात से वा अझै पुगे का छै नन् । ती क्षे त्रमा से वा पु¥याउने पहिलो सो च बनाएका छौ ं । दो स्रो , से वा परिमार्जनको कुरा राखे का छौ ं । जस्तै दुई हजार मो डे लका पुराना गाडीहरुलाई निषे ध गरी नया“ सवारी साधन खरीदका लागि सवारीधनीहरुलाई प्रो त्साहन गर्ने लक्ष लिएका छौ ं । जसका कारण वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गरी सफा र सुन्दर दाङ निर्माण गर्न सकिने छ भने स् तरीय से वाउन्मुख दाङ बनाउने , सबै गाउ“मा यातायात से वा पु¥याउनु अबको हाम्रो काम हुने छ । यातायात क्षे त्रका समस् याहरुमा हिजो का कतिपय समस् याहरु अझै दो हो रिरहे का छन् । जस् तै सवारी दुर्घटनाको कुरा हिजो पनि भइरहन्थे  । आज पनि भइरहे का छन् । तर हिजो का तुलनामा के ही कमी पक्कै छ । तर दुर्घटना पूर्णरुपमा रो किन सके को छै न । त्यो रो क्न सकिन्छ पनि भन्न सकिन्न । तर अब हिजो कै त्यही दुर्घटनाका घटना नूनीकरण गर्न अब अभियानात्मकरुपमा विद्यालय, चौ तारी र प्रत्ये क बसपार्कहरुमा गाडी मालिक, चालक र यात्रुहरुलाई स“गस“गै सचे तना दिने र यातायातका अन्य समस् याहरु सडक समस् या, अस् वस् थ प्रतिस् र्धा र गाडी आयातको समस् याका विषयमा निरन्तर समाधानका उपाय खो जिरहे का छौ ं ।
यातायात क्षे त्रका समस् या के –के हुन् र ती समस् या समाधान गर्न के गर्नुपर्ला ?
यातायात क्षे त्रभित्र तमाम समस् या छन् । ती समस् याहरु हिजो पनि उस् तै थिए । आज पनि उस् तै अवस् था भो ग्नु परिरहे को छ । राज्यले यातायात क्षे त्र व्यवस् िथत तरीकाले सञ्चालन गर्न सके को छै न । यातायात क्षे त्रलाई राज्यले व्यवस् िथत तरीकाले सञ्चालन गर्नका लागि यातायात प्राधिकरण वा यातायात बो र्ड गठन गर्न आवश्यक छ । किनकि यातायात क्षे त्रका हिजो का समस् या उस् तै भइरहे काले अब राज्यले नया“ तरीकाले समाधानको उपाय खो ज्नु जरुरी छ । मुलुकभरका सार्वजनिक यातायातका साधनहरुलाई व्यवस् िथत तरीकाले सञ्चालन गर्नु राज्यको पनि दायित्व हो र राज्यले यातायात क्षे त्रको विकास र संरक्षणका लागि दुई कुरामा एक कुरा गर्न जरुरी छ । गाडी आयात, सडक, अस् वस् थ प्रतिस् पर्धाले यातायात क्षे त्र विस् तारै नो क्सानीतिर उन्मुख भइरहे को छ । राज्यले भूगो ल, जनसंख्या, सडकको अवस् थाको निक्र्याै ल गरी सवारी साधन थपघट गरी स् तरीय र सुरक्षित से वाको विकास गर्न सके यातायात क्षे त्रको आधा समस् या समाधान हुनसक्छ । स् वच्छ से वाको विकास हुने , दुर्घटनाका कारण अकालमा कसै ले ज्यान गुमाउनु नपर्ने र यात्रुमै त्री से वाको विकास हुने छ  ।
सिण्डिके ट प्रणालीका पनि कुरा उठिरहे का छन् नि ?
यातायात व्यवसायीहरुले मुलुकमा सिण्डिके ट प्रणाली छ भने र स् वीकार गर्न सक्दै नांै  । हामीले यातायात से वालाई आलो पालो रुपमा सञ्चालन गरेर कुनै पनि व्यवसायीहरुलाई मर्का नपर्ने गरी काम गरे का छौ ं । त्यो तपाइ“ले दे खिरहनुभएको छ । सबै ले रो जीरो टीका लागि मजदुरी गरिरहे का छन् । सिण्डिके ट भने को एकलौ टी भन्ने शब्दलाई जनाउ“छ । तर दाङमा साना तथा ठूला सवारी साधनको समिति र प्रालिहरु खुले का छन् । जसका कारण दाङमा यातायात से वा फे रिएको भन्न सकिन्छ । तर दाङमा थे ग्न सक्ने यातायातका साधन, यात्रु संख्या मापन, सडकको अवस् था र यात्रुको स् तर के छ भने र कुनै कुराको अध्ययन नगरी यातायातका साधन भिœयाउने दर बढे काले त्यसले यातायात व्यवसायीहरुबीच प्रतिस् पर्धालाई निकै उचाइमा पु¥याएको छ । अर्काे कुरा, जथाभावी यातायातका साधन भिœयाउने प्रवृत्ति र सा“घुरा सडकका कारण दाङ सवारी दुर्घटनाको उच्च जो खिममा छ । त्यो सबै ले भो ग्दै आइरहे का छौ ं । मै ले भन्न खो जे को के भने समिति छ भने समितिले कति गाडी चलाउन पाउने , प्रालि छ भने आवश्यकता अनुसार कति गाडी चलाउन पाउने भन्ने कुरालाई राज्यले भूगो ल, सडक र जनसंख्या मापन गरी त्यसको उचित व्यवस् थापन गर्नुपर्छ । सबै ले आलो पालो मै से वा सञ्चालन गरी सहज र विश्वसनीय से वाको विकास गर्न अझ जरुरी छ । त्यो राप्ती अञ्चल सार्वजनिक यातायात व्यवसायी समितिले गर्ने छ । हामी दाङमा यातायात क्षे त्रको एउटै समिति बनाई लै जाने प्रयासमा पनि छौ ं । दाङमा खुले का प्रालि र समितिबीच कार्यगत एकता गरी समिति एकीकरण गरी से वास् तरमा स“गै स‘“गै जाने प्रयास गरे का छांै  । प्रालि र समितिबीच के ही सहमति भइसके का छन् । के ही हुन बा“की छन् । यही अधिवे शनले प्रक्रिया रो किएको छ । चै तमा प्रालि र समितिबीच कार्यगत एकता गरी से वा क्षे त्रको विकास अझै बढाउने प्रयासमा छांै  ।
यात्रुमै त्री व्यवहार भएन, यात्रुको बिचल्ली हुने जस् ता कुराहरु बे ला–बे लामा सुनिन्छन् । नि ?
आम यात्रुहरुलाई सहज यातायात से वा र यात्रुमै त्री व्यवहार दिलाउने हाम्रो पहिलो दायित्व हो  । त्यो भो लि पनि रहने छ । राप्ती अञ्चल सार्वजनिक यातायात पश्चिम ने पालमै लगभग जे ठो संस् था हो । जसका कारण हामीले लामो समयदे खि सहज, स् तरीय र यात्रुमै त्री से वा दिदै आइरहे को दाबी पनि गरिरहे का छौ ं । त्यो सत्य हो पनि । अर्काे कुरा तपाइले जुन कुरा गर्नुभयो विश्वसनीय, उदाहरणीय र यात्रुमै त्री से वा भन्ने कुरा हामीले त्यो पूरा गरिसके का छौ ं । अझै हामीले राप्ती सार्वजनिक यातायात से वालाई विश्वसनीय से वाका रुपमा सञ्चालन गनेर् प्रयासमा छांै  । निश्चित गन्तव्यमा लगी यात्रुहरुलाई छो ड्ने गरे का छौ ं । यात्रुहरुलाई सुरक्षित तरीकाले चालक, परिचालकहरुको मिठासपूर्ण व्यवहारका साथ गन्तव्यसम्म पुग्न र पु¥याउने काम गरिरहे का छौ ं । त्यसमा अझ परितर्वन गर्न हामी लाग्ने छांै  । सार्वजनिक यातायात से वाको अभाव र समस् या कसै लाई पनि भो ग्न बाध्य बनाउने छै नौ ं । त्यस् ता कुरामा समितिले निकै गम्भीरताका साथ काम गर्ने प्रयास गरिरहे को छ ।
स् थानीय रुटहरुमा दिउसो टिपाटिप हुन्छ, राति निकै कष्टकर छ नि ?
हामीले स् थानीय रुटहरुमा जस् तै ः तुलसीपुर, घो राही र लमही रुटमा स् थानीय तहहरुको समन्वयमा नगर बस सञ्चालन गरी यात्रुहरुलाई रातिको द्विविधा हटाउने पहिले दे खिको यो जना बनाएका छौं । अपशो च ! त्यो अझै पूरा हुन सके को छै न । जसका कारण रातिमा स् थानीय रुटका यात्रुहरुलाई से वामा कष्ट भएको हामीले पनि स् वीकार गर्छांै  । तर अब हामीले जनप्रतिनिधिहरुको निर्वाचनस“गै दाङका घो राही, तुलसीपुर, लमही क्षे त्रमा राति १० बजे सम्म नगर बसको से वा सुचारु गरी यात्रुको कष्टलाई सहजतामा परिणत गरी रात्रिकालीन स् थानीय से वा सञ्चालन गर्ने छांै  ।
दुर्घटनामा मृत्यु भएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति वापतको रकम पाउन निकै झमे ला छ रे ? त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
दुर्घटनामा मृत्यु भएका, अंगभंग भएकाहरुले पाउनुपर्ने उपचार से वा र क्षतिपूर्तिका विषयमा समिति निकै जिम्मे वार छ । यातायात व्यवसायीहरुलाई राज्यले बिमामा कुनै सहुलियत र छुट दिएको छै न । हामीले तिरे को रकमबाटै हामीले क्षतिपूर्ति र औ षधि उपचार गराउने गरे का छौ ं । राज्यले बिमाको श्रे णीकरण गरी बिमामा छुट नीति अवलम्बन गर्नु निकै आवश्यक छ । जस् तै ः सवारी दुर्घटनामा परी एक बृद्धको ज्यान गयो  । बृद्धको परिवारलाई कति रकम क्षतिपूर्ति दिने , बालबालिकाहरुको कति दिने , डाक्टरहरु परे कति दिने र एकजना मजदुर छ, उसले मजदुरी गरी कतिजनाको पालनपो षण गरे का छ भन्ने कुराको निक्र्याै ल गरी बिमाको श्रे णीकरण गरी छुट्याउन जरुरी छ ।
अन्त्यमा थप के ही भन्नु छ ?
अब हामीले सुरक्षित र व्यवस् िथत यातायात से वाको विकास गरी गर्व गर्न लायक यातायात से वाको विकास गर्ने छांै  । अन्त्यमा यो समय र विचारका लागि पत्रिका परिवारलाई धन्यवाद ।
Previous: श्रमिक महिला दिवसका फरक दृश्य
Next: सुरक्षित आवासको अभियानलाई राष्ट्रब्यापी बनाऔ ं